Digital microphone for ios deivce – Rocket Online Shopping
Digital microphone for ios deivce
Home ShopMobile Phone AccessoriesDigital microphone for ios deivce
Digital microphone for ios deivce quantity
Categories: Mobile Phone Accessories, Recorder, Technology.	Tags: interviewing record, ios microphone, live record, meeting recording, microphone, online class voice record, recorder for video creator, video voice recording, ကော်လံမိုက်.
Video တှရေိုကျကူး ဖနျတီးရာမှာ အရေးကွီးဆုံးက ရုပျထှကျကွညျလငျပွတျသားဖို့ရယျ အသံကွညျလငျဖို့ရယျပါပဲ……….။
ဖုနျးနဲ့ Video ဖနျတီးတာပဲ ဖွဈဖွဈ Online မှာ Live လှငျ့တာပဲဖွဈဖွဈ ဖုနျး Camera တှကေ ရုပျထှကျ ကွညျလငျပွတျသားပမေဲ့ ဘေးပတျဝနျးကငျြက ဆူညံသံတှေ တဈခါတဈခါ အသံတိုးတာတှဖွေဈတော့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Video တဈခု မဖွဈတော့ဘူးပေါ့..။
Live လှငျ့ပွီး Online shopping လုပျသူမြားနဲ့ ဖုနျးနဲ့ ပဲ အပြျောတမျး Video တှဖေနျတီးတဲ့ သူမြား ၊ Online Class တကျရောကျနသေူမြားအတှကျ အကောငျးဆုံးသော ကျောလံမိုကျလေးကို Rocket မှာရောငျးခပြေးနပေါပွီ………။
IOS Device တှအေတှကျ သီးသနျ့ဖွဈတဲ့ပွီး ios version 8.0 နဲ့ အထကျရှိတဲ့ မညျသညျ့ iphone,ipad တို့နဲ့ မဆို အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈတယျ…………..
အရညျသှေးကောငျးပွီးလူကွိုကျမြားတဲ့ အတှကျ အမွနျဆုံးမှာယူလိုကျပါနျော………..။
ဈေးနှုနျး – 45000 kyats
Video တွေရိုက်ကူး ဖန်တီးရာမှာ အရေးကြီးဆုံးက ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားဖို့ရယ် အသံကြည်လင်ဖို့ရယ်ပါပဲ……….။
ဖုန်းနဲ့ Video ဖန်တီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Online မှာ Live လွှင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်း Camera တွေက ရုပ်ထွက် ကြည်လင်ပြတ်သားပေမဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံသံတွေ တစ်ခါတစ်ခါ အသံတိုးတာတွေဖြစ်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Video တစ်ခု မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့..။
Live လွှင့်ပြီး Online shopping လုပ်သူများနဲ့ ဖုန်းနဲ့ ပဲ အပျော်တမ်း Video တွေဖန်တီးတဲ့ သူများ ၊ Online Class တက်ရောက်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံးသော ကော်လံမိုက်လေးကို Rocket မှာရောင်းချပေးနေပါပြီ………။
IOS Device တွေအတွက် သီးသန့်ဖြစ်တဲ့ပြီး ios version 8.0 နဲ့ အထက်ရှိတဲ့ မည်သည့် iphone,ipad တို့နဲ့ မဆို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်…………..
အရည်သွေးကောင်းပြီးလူကြိုက်များတဲ့ အတွက် အမြန်ဆုံးမှာယူလိုက်ပါနော်………..။
ဈေးနှုန်း – 45000 kyats
Be the first to review “Digital microphone for ios deivce” Cancel reply
Portable Air-Conditioning Fan
Car Accessories, Computer Accessories, Household, Mobile Phone Accessories, Technology, Tools, Travel
Simply Straight Or ဖြောင့်ဘီး ဖြောင့်စက် Ks30,000.00 Ks9,000.00